१८ खर्बको बजार धरापमा « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित
१८ खर्बको बजार धरापमा
२१ श्रावण २०७३, शुक्रबार १५:४७
काठमाडौं/ नेपालको सेयर बजार कुल १८ खर्ब रुपैंयाभन्दा माथिको छ । तर, यो बजार एकजना सन्काहा ब्यक्तिको निहित स्वार्थका कारण कुनै पनि बेला ध्वस्त हुने अवस्थामा पुगेको छ । सेयरको अनलाईन कारोवार हुने सफ्टवेयरको म्याद नाघेको चार बर्ष भैसक्दा पनि जबर्जस्ती चलाईरहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले अर्को नया“ ल्याउने भनिएको सफ्टवेयर झनै कमजोर र काम नलाग्ने अवस्थाको छ ।
धितोपत्र बोर्डले अन्तराष्ट्रियस्तरको बाहेक लोकल प्रचलनको सफ्टवेयर नकिन्न निर्देशन दि“दा दलालस“ग मिलेर बोर्डबिरुद्ध नै मुद्दा हाल्ने योजना बनाएका नेप्सेका महाप्रवन्धक सिताराम थपलियाले झण्डै ४५ करोड रुपैंयाको घोटाला गर्ने भएका छन् । त्यसका लागि बोर्डको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै नेप्सेले धमाधम सम्झौता गरिरहेको छ ।
नेप्सेले सफ्टवेयर खरिदका लागि एउटा भारतीय कम्पनीको नेपाली एजेन्टस“ग भित्री सम्झौता गरिसकेको छ । सोही कम्पनीको प्रतिनिधीस“ग महाप्रवन्धक थपलिया एक बर्षअघिदेखि नै पार्क भिलेज रिसोर्टमा नियमित मिटिङ गर्दै आइरहेका छन् । सो कम्पनीको सफ्टवेयर खरिद गरेवापत थपलियाको समुहले तत्काल ३ करोड रुपैंया नगद पाउने र बार्षिक मर्मत शुल्कको कमिशनको २५ प्रतिशत पाउने गरी कमिशनको रेट तय भएको नेप्सेका एक बरिष्ठ अधिकारीले जानकारी दिए ।
नेप्सेले भारतीय कम्पनी ‘ईन्फिनिटी कम्प्युटर सोलुसन्स’सग नया सफ्टवेयर खरिद गर्ने सम्झौता गरेको हो । नेप्सेले खरिद गर्न लागेको सफ्टवेयरको गुण्ँस्तरमा प्रश्न चिन्ह उठाउ“दै नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेप्सेस“ग स्पष्टीकरण्ँ मागेको थियो । बोर्डले सो सफ्टवेयरले नेपाली बजार धान्न नसक्ने र भोलिका लागि अन्तराष्ट्रिय बजारस“ग जोडिन सक्ने तथा लगानीकर्ताले नै अनलाईन कारोवार गर्न सक्ने खालको सफ्टवेयर खरिद गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
धितोपत्र बोर्डले अत्याधुनिक सफ्टवेयर खरिदका लागि निर्देशन दिएपछी नेप्सेले बोर्डबिरुद्ध अदालत जान भारतीय कम्पनीका नेपाली एजेन्टलाई सुझाव दिए । नेप्से महाप्रवन्धक थपलिया र एजेन्टबिचको मिलेमतोमा भारतीय कम्पनी ईन्फिनिटीको नेपाली प्रतिनिधी (एजेन्ट) वाइसीओ इन्कर्पाेरेशनले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर मुद्दामा भने उसले नेप्सेलाई पनि बिपक्षी बनाएको थियो । यो सब योजनाबद्ध रुपमा सोही कम्पनीको सफ्टवेयर किन्ने मिलेमतोमा भएको थियो ।
नेप्सेस“ग भएको पुर्वसम्झौता अनुसार आफ्नो सफ्टवेयर खरिद गर्नुपर्ने माग राख्दै एजेन्ट कम्पनी अदालत गएपछि नेप्सेले पनि उसैलाई फाईदा पुग्नेगरी प्रत्यूत्तर लगाएको थियो । नेप्सेले सफ्टवेयर खरिद नगर्ने आफ्नो मनसाय नभएको जवाफ दि“दै आफुहरु सम्झौता बमोजिम सफ्टवेयर खरिदका लागि तयार रहेको जवाफ अदालतलाई दिएको थियो ।
नेप्सेको सम्झौता उल्लंघन गर्ने मनासाय नरहेको भन्ने जवाफकै आधारमा जिल्ला अदालतले एजेन्ट कम्पनीलाई नै सजिलो हुने गरी आदेश दिएको थियो । तर अदालतको आदेशको पूर्णपाठ नआउ“दै नेप्सेले भने अदालतको आदेश बमोजिम भन्दै सफ्टजेयर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । उसले बोर्डलाई पनि अदालत र अख्तियारको आदेश आएको भन्दै सोही कम्पनीस“ग सफ्टेवयर खरिद गर्ने आफ्नो मनसाय देखाईसकेको छ ।
अख्तियारलाई पनि मुछियो
हरेक बैठक र सार्वजनिक जमघटमा आफुलाई पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको सबैभन्दा नजिकको व्यक्ति बताउने नेप्से महाप्रवन्धक थपलियाले अख्तियारको निर्देशनमा आफुले सो कम्पनीस“ग सफ्टवेयर खरिदको सम्झौता गरेको बताउने गरेका छन् । यसअघि अर्थमन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डमा भएको छलफलमा उनले पटक पटक अख्तियारस“गको सल्लाहमा आफुले सो निर्णय गरेकाले खरिद प्रक्रिया नरोक्न उनले अप्रत्यक्ष रुपमा धम्क्याएका थिए । उनले सफ्टवेयर खरिदका लागि अख्तियारस“ग सहमति पत्र समेत ल्याएका छन् । सोही पत्रको आधारमा उनले मन्त्रालय र बोर्डका अधिकारीहरुलाई धम्क्याउने गरेका छन् ।
सफ्टवेयर खरिदमा राम्रै चलखेल भएको आशंका गरे पनि अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले सेयर बजारस“ग भने, ‘हामीले रोक्न सकेनौं, ठुलाबडा नै लागेपछी के गर्न सकिन्छ र ?’ उनका अनुसार सफ्टवेयर विक्रेता कम्पनीले डा. महतदेखि वर्तमान अर्थमन्त्रीलाई समेत प्रभावमा पारिसकेका छन् । अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको समेत नाम लिएर मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई धम्क्याईन गरिएको थियो । अख्तियारको स्वार्थको कुरा आएपछी सरकारी अधिकारीहरु केही बोल्न नसक्ने भएकाले यसरी दुरुपयोग गरिएको बताइएको छ ।
कति पैसा तिरि“दैछ ?
बोर्डको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै भारतीय कम्पनीको नेपाली एजेन्टस“ग १९ करोड ९० लाख रुपैंया तिर्नेगरी खरिद सम्झौता गरिसकेका छन् । त्यसमा १० करोडमा सफ्टवेयर र ९ करोडमा हार्डवेयरवापतको रकम तिरिने बताइएको छ । हस्ताÔर भएको १४ महिनामा कम्पनीले सफ्टवेयर हस्तान्तरण्ँ गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था सम्झौतामा छ ।
१० करोडको सफ्टवेयरका लागि ९ करोडको हार्डवेयर सामान कुनै पनि हालतमा नलाग्ने बिज्ञहरु बताउ“छन् । कम्तिमा ४–५ करोडको हार्डवयर भए जत्ति पनि पुग्छ तर तह तहमा कमिशनको जालो भएकाले यसरी रेट बढाइएको हो ।
उता सफ्टवेयर खरिदको २० करोड भए पनि त्यसको जडान र मर्मतको खर्चको आकार सुन्ने हो भने आत्यास लाग्ने अवस्था छ । नेप्सेले सोही सफ्टवेयरको नियमित मर्मत संभारको लागि छुट्टै कम्पनीलाई ठेक्का दिने सम्झौता गर्दैछ । त्यसका लागि बार्षिक ५ करोड रुपैंया भुक्तानी दिने तय भैसकेको छ । ५ बर्षका लागि गरिने यस्तो सम्झौतामा पहिलो बर्ष मर्मत शुलकबापत ५ करोड तिर्ने र हरेक बर्ष १० प्रतिशतका दरले बृद्धी गरिने गरी सम्झौता गर्ने योजना बनाइएको छ ।
सफ्टवेयर मर्मत भनेको कुनै गाडीको मर्मत जस्तो हैन । यसमा खासै खर्च लाग्ने पनि हैन । तर पनि नेप्से महाप्रवन्धक थपलियाले आफु पदबाट हटेपछी पनि लामो समयसम्म राम्रो कमिशन आईरहने हुनाले बढी रकम दिएर लामो समयको सम्झौता गर्न लागेका हुन् । ५ बर्षको यो सम्झौता भएमा मर्मतका लागि मात्रै नेप्सेले ३५ करोड रुपैंया तिर्नुपर्ने हुन्छ । सफ्टवेयरको मुल्य यसमा जोड्ने हो भने कुल रकम ५५ करोड सिद्धिन्छ ।
बजार नै धरापमा
अत्याधुनिक प्रविधी भनिए पनि नेप्सेको काम गराईले कुनै पनि दिन सिस्टम क्र्यास हुने अवस्था छ । यदी त्यस्तो भएमा १८ खर्बको बजारको हिसाव क्षणभरमै गोलमाल हुन्छ । कतिसम्म भने कारोवारको सर्भरको सुरक्षाको लागि यसअघि सिंगापुरमा एउटा छुट्टै सर्भर राख्ने योजना तय भए पनि काम हुन सकेन ।
अहिले सेयरको सबै कारोवार सिडिएसमार्फत हुन्छ । तर, भारतीय सरकारले सित्तैमा दिएको सिडिएसको सफ्टवेयर मर्मतको लागि अहिलेसम्म कुनै पनि कम्पनीले जिम्मा लिएको छैन । सोही कारण सामान्य समस्या आउ“दा पनि कारोवार बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ । सिडिएस सिस्टम चलेको २ बर्ष हु“दा पनि अहिलेसम्म एएमसी नभएकाले नेप्सेले कुनै काम गर्नुप¥यो भने सफ्टवेयरका कारण संभव छैन भनेर पन्छिने गरेको छ । यसअद्धि बोर्डले क्लिएरिङ बैंक थप्नका लागि दिएको निर्देशन पनि सफ्टवेयरको बहाना देखाएर पन्छेको थियो ।
डेट एम्क्सपायर सफ्टवेयर
एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा २०६४ सालमा अटोमेशन सिस्टम जडान गर्नुअघि नेपालको सेयर कारोवार नेप्सेको ठुलो हलमा ब्रोकरहरु मुखैले कराएर गरिन्थ्यो । त्यतिबेला ट्रायलको लागि भनेर ३ करोड खर्चमा जडिएको सफ्टवेयर बढीमा ५ बर्ष धान्न सक्ने भनिएको थियो । सफ्टवेयरको म्याद नाघेको पनि ४ बर्ष भैसक्यो । म्याद पुगेपछी सिस्टम अपडेट गर्ने वा फेर्नुपर्ने निर्माता कम्पनीले बताएको भए पनि विगत चार बर्षदेखि अलपत्र छ ।
धितोपत्र बोर्डले अबको नेपाली पु“जी बजार अन्तराष्ट्रियस्तरको हुनुपर्ने भन्दै सोही अनुरुपको सेवा दिन सकिने असफ्टवेयर जडान गर्नका लागि नेप्सेलाई पटक पटक निर्देशन दिएको छ । तर, नेप्सेले बोर्डको सो निर्देशनको अवज्ञा गर्दै भारतीय कम्पनीको सफ्टवेयर जडान गर्ने तयारी गरेको छ । महाप्रवन्धक सिताराम थपलियाको पदावधी अब बढीमा एक बर्ष बा“की छ । सोही कारण पनि उनी आफ्नै कार्यकालमा सफ्टवेयर खरिद र बार्षिक मर्मत सम्झौता गरी पछीसम्म करोडौं कमिशन खाने दाउमा छन् ।
नया“ कारोबार प्रण्ाँली भित्र्याउने बारेमा काठमाडौ जिल्ला अदालतमा परेको मुद्दा खारेज भएको छ । नेप्सेको नया“ सफ्टवेयर आपुर्ति गर्न छनौट भएको कम्पनी वाइसिओले जिल्ला अदालतमा नेप्से र नेपाल धितोपत्र बोर्ड बिरुद्ध मुद्दा दायर गरी आफुले सफ्वेयर बिक्री गर्न पाउनुपर्ने दावी गरेको थियो । तर, नेप्सेले आफु खरिदका लागि तयार रहेको जवाफ दिएपछी मुद्दा खारेज भएको हो । गत सोमबार कार्यालय समय सकिनै लाग्दा जिल्ला अदालतको ईजलासले यस मुद्दामा आफ्नो फैसला दिएको बताईएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेप्सेलाई झण्डै चार महिना अघि नया“ कारोबार प्रण्ाँली जडान गर्न कडा निर्देशन दिएको थियो । बोर्डले अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा परीÔण्ँ भएको, बिदेशबाट समेत अनलाईन सेयर कारोबार गर्न मिल्ने कारोबार प्रण्ाँली भित्रयाएर हालको प्रण्ाँलीलाई बिस्थापन गर्न भनेको थियो । तर हालकै जस्तो घरेलु प्रण्ाँली जडान गर्न धितोपत्र बोर्डको निर्देशनले बाधा पु¥याएपछि नेप्सेस“गको मिलेमतोमा वाईसियो अदालत गएको थियो ।सेयर बजार साप्ताहिकबाट
प्रकाशित : २१ श्रावण २०७३, शुक्रबार १५:४७